I-AI yophuhliso lwezithuthi kunye ne-AIFPv3: Iindiza ze-AI azibonakali ... Kutheni
umbuzo I-AI yophuhliso lwezithuthi kunye ne-AIFPv3: Iindiza ze-AI azibonakali ... Kutheni
iinyanga 1 kunyaka 5 eyadlulayo #801 by laurentCazorla
Ndidale iinqwelo zam i-Cevenn'air iinqwelo kunye ne-FSX eyisisiseko ye-B738 kunye ne-CRJ700 ndizenzele kwaye ndiyifake i-regulary fly. Nangona ndifuna ukudala i-AI yendlela yokuhamba kunye ne-AIFPv3 ... Konke kulungile ukusekela iindiza ze-AI kwaye ziqokelele, xa ndiqala i-FSX Steam iyilanda njengendawo entsha kodwa xa ndiya kwisikhumulo sezindiza apho iindiza zam kufuneka ukubonisa kwi-Airport, ngexesha ndidibene ne-AIFP, nayiphi na enye ibonisa ... Ndiyabuza ukuba ngaba ngenxa yeFSX Steam. Enyanisweni xa ndifuna ukumisa i-AIFP nge-Steam (SE) andinakuqhubeka. Ndiyanyanzelekile ukuba ndimise njengeFSX. Ndibe sele ndiyi-Traffic i-World ye-AI kwaye sele ndizamile ukumisa i-KLM WoAI B738 kwi-flight EHAM / LFMT, ndidibana nenxaki efanayo ...
Ndingathanda ukwazi ukuba kukho enye indlela yokumisela i-AI traffics ngaphandle kokudlula nge-AIFP ... Ndivakalelwa kukuba